Necrobacteriosis गाई: निदान र रोगजनक। रोग को विवरण, लक्षण, उपचार
Necrobacteriosis गाई - कारण संक्रामक पशु रोग को anaerobic जीवाणु को जीनस Fusarium को Fusobacterium necrophorum। यसको मुख्य अप्रिय परिणाम दूध उत्पादन र प्रजनन घाटा मा एक महत्वपूर्ण कमी हो। यो रोग संग गाई को हानि शायद हुन्छ हुनत, यो भारी लागू फारमहरु बिगार्न सक्छ। र त किसान र निजी परिवारमा को मालिक महत्त्वपूर्ण सही यसको रोकथाम र उपचार बाहिर कसरी थाहा छ।
को causative एजेन्ट nekrobakterioza गाई यसरी जीवाणु Fusobacterium necrophorum छ। भ्यागुते रोग calves मा, 1882 मा Leffler - उहाँले वर्णन पहिले नै एकदम लामो समय भएको थियो। 1881 आर कख मा चेचक संग दुःख को कर्निया भेडाको छडी, पहिचान। पछि, भाइरस वैज्ञानिकहरू Schütz र Tartakovsky रूपमा पत्ता लाग्यो। Fusobacterium necrophorum बैंग को शुद्ध संस्कृति पहिलो 1891 मा, एउटै microbiologist SHmorlja गरे, यो जस्तोसुकै 1890. मा प्राप्त भएको थियो।
Necrobacteriosis गाई: संक्रामक एजेन्ट
Microbe Fusobacterium necrophorum polymorphic छ, र छड वा एउटै लामो पातलो सूत्रहरू को रूप मा छ। उत्तरार्द्ध एक गोलाकार वा कोन आकारको उभाडना फारम गर्न सक्छन्। यो जीवाणु Fusobacterium necrophorum, स्थिर छ कुनै flagella छ, र कुनै spores वा दाना खेल्छ। एकै समयमा यो ग्लूकोज, levulose, galactose, sucrose, maltose र salicin ferments। अमोनिया यो microbe उत्पादन गर्दैन। यो पुनर्स्थापना गर्दैन, र nitrates गर्न nitrates।
रोगजनक Fusobacterium necrophorum अपेक्षाकृत अस्थिर। तर, दुर्भाग्य, यो पर्यावरण वस्तुहरु को एक किसिम मा लामो समय को लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ। माथि 15, र दूध मा - - यसरी, पशु मलको मा यसलाई मूत्र र पानी मा 50 दिन बसोबास 35 दिन सम्म। यो microbe मा सूर्य गरेको रेज विनाशकारी छन्। छैन छाया मा बेला जीवाणु दिउँसो पछि मर्छ।
उच्च विभिन्न disinfectants गर्न Fusobacterium necrophorum संवेदनशीलता। तसर्थ, barns को सफाई राखन, तपाईं एकदम जनावर यो रोग विकास को जोखिम कम गर्न सक्नुहुन्छ। मृत्यु जस्तै जीवाणुहरु Fusobacterium necrophorum antiseptics:
सोडियम हीड्राकसीड र पोटासियम (0.5%);
पोटासियम Permanganate (1: 1000)।
साथै, यस microbe tetracycline लागूपदार्थ गर्न अत्यन्तै संवेदनशील छ।
यो नै गाई ज्यादातर purulent घाउ necrobacteriosis प्रकट। तिनीहरूले अक्सर गाई मा उत्पन्न:
को limbs तल्लो भागहरु;
योनी र गर्भाशय को श्लेम लाग्एको झिल्ली।
Necrobacteriosis गाई पनि श्लेम लाग्एको diphtheritic कण्ठ, मौखिक गुहा र आन्तरिक अङ्गहरूको सुनिंनु द्वारा विशेषता। यी लक्षण सामान्यतया युवा जनावर अवलोकन छन्।
तपाईं कसरी संक्रमित प्राप्त गर्छन्
Necrobacteriosis गाई अक्सर छाला गर्न क्षति संग जब traumatizing मा विकास। capillaries निष्ठा उल्लंघन उत्पन्न घाउ यो anaerobic bacillus अक्सिजन रहित वातावरण जीवन को लागि अनुकूल गठन गरिएको छ। विशेष साथै रगत hematomas मा भाइरस प्रचारित। जीवन Fusobacterium necrophorum को परिणाम विषाक्त पदार्थ को ठूलो मात्रा उत्पादन। पछिल्लो ब्लक intracellular इन्जाइम प्रणाली, जो गराउँछ ऊतक necrosis। यसरी त्यहाँ अझै पनि एक प्रतिकूल प्रक्रिया केशिका blockage माइक्रोबियल कक्षहरू जस्ता छ।
संक्रमण मात्र होइन, तर पनि जठरांत्रिय पर्चा को श्लेम लाग्एको झिल्ली मार्फत घाउ मार्फत, रोग प्रसब वा संभोग समयमा हुन सक्छ।
शरीर भाइरस hematogenous मार्ग, ie, रगत मार्फत भर। फलस्वरूप, त्यहाँ माध्यमिक ऊतक घाउ छन्। साथै, रगत मा भाइरस को प्रवेश कारण, हृदय, कलेजो र फोक्सोमा मा septicemia र metastases गठन necrotic foci विकास। रोग यो चरण मा आय भने, उपचार सामान्यतया ineffectual छ। metastases necrobacteriosis गाई को गठन मा पशु को एक घातक फारम मा र प्रायजसो हत्या मा जान्छ। रोग भइरहेको गाई मा प्रतिरक्षा, दुर्भाग्यवश, व्यावहारिक उत्पादन छैन।
केही अवस्थामा, जनावर संक्रमित हुन सक्छ
संक्रमण अक्सर nekrobakteriozom गाई हुन्छ:
को खलिहान मा स्वच्छता को कमी को कारण;
कारण निवारक टाप Trimming को PERIODICITY संग गैर-पालन गर्न;
कारण कमी गर्न उपकरण cowshed (निकै पशु फोहर फाल्न को अभाव मा, Stables मा छोटो);
पुरानो rumen acidosis फलस्वरूप।
मलको, र्याल, र संक्रमित जनावर को मूत्र संग वातावरण मा nekrobakterioza रोगजनक प्रदान। साथै, भाइरस purulent स्राव मा निहित।
यो खेत रोगजनक nekrobakterioza अक्सर प्राप्त हुर्काउन वा उत्पादकहरु संग बिरामी हुन्छ। छोटो समय पहिलो पशु संक्रमण पछि खलिहान मा एक संक्रमण एक स्थिर चरित्र बन्दछ। यदि गाई उपचार उपाय समय मा, रोग प्रक्रियाहरू भारी किनभने अर्को गर्न पटक-पटक जीवाणुहरु को एक व्यक्तिबाट स्थानान्तरण को लिएको छैन।
Necrobacteriosis रोग गाई मा epizootic (सिरियल संक्रमित जनावर) को सानो फैलने मा नै प्रकट, unevenly को खलिहान मा हुन्छ।
गर्मी चालू अवधि केही दिन nekrobakterioza रहन्छ। यो सरुवा रोग को संकेत धेरै कारक मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, पशु, प्रदर्शन nekrobakterioza र यसको प्रवाह विशेषताहरु को फारम को उमेर जस्तै। यो रोग तीव्र दुवै र क्रोनिक, साथै सौम्य वा घातक हुन सक्छ।
त्यहाँ nekrobakterioza तीन मुख्य प्रकारका छन्:
श्लेम लाग्एको झिल्ली र छाला;
सबै भन्दा साधारण necrobacteriosis hoofed गाई छ। फोटो विशेषता घाउ रोग तल प्रस्तुत गर्दा देखा छ। अक्सर गाई मा हिंद limbs रोग (वा तिनीहरूलाई एक) को यो फारम संग प्रभावित छन्। यो एक साधारण necrobacteriosis राता mezhkopytnoy भट्ठा साथ सुरु हुन्छ। रोग को अर्को चरण मा आक्रान्त purulent घाउ, fistulas र abscesses देखिन्छन्। जनावर अत्यन्तै असहज महसुस र वजन मा प्रभावित limb धारण। परीक्षा समयमा संयुक्त टाप phalanges को सुनिंनु प्रकट गर्नुभयो। रोग थप विकास संग क्षति बंधन, हड्डी र tendons अवलोकन। अप हिप गर्न - प्रक्रिया को घातक प्रकृति प्राप्त भने, पशु चोट र overlying जोइन्टहरूमा सुरु हुनेछ।
को संक्रमित व्यक्तिहरूको शरीर तापमान 42 टी सम्म जान सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीं, यो पनि सामान्य दायरामा रहन्छ। Nekrobakteriozom बिरामी limbs मूलतः मात्र वयस्क गाई र साँढेको। calves मा, यो फारम धेरै विरलै देखिन्छ।
nekrobakterioze mucosal र छाला घाउ थप, शरीर को क्षेत्र मा साधारण सामान्यतया यो पछाडि भाग मा हुँदा। युवा जनावर मा पनि मुख, गिजा, ट्रेकिआ, जिब्रो, नाक, घाँटी, पेट को श्लेम लाग्एको झिल्ली को purulent necrosis अवलोकन गर्न सकिँदैन, र यति मा। डी
Necrobacteriosis गाई को आन्तरिक अङ्गहरू प्राय नै प्रकट कलेजो विद्रधि। यो विशिष्ट नैदानिक संकेत मा सामान्यतया अवलोकन छैन। एकदम उत्पादकत्व, खडा गर्ने प्रयास गर्दा विलाप कम, खराब खाने चाँडै वजन - तर nekrobakterioza को यो फारम संक्रमित पशुहरू आफूलाई धेरै महत्वहीन लाग्छ। जब nekrobakterioze आन्तरिक अङ्गहरू, अन्य कुराहरु, गाईहरु निकै वृद्धि गर्न सक्छन् शरीर तापमान।
symptomatic संकेत necrobacteriosis गाई (फोटो रोगजनक तल प्रतिनिधित्व) बाहेक प्रयोगशाला परीक्षण को परिणाम आधारित निर्धारण गर्न सकिँदैन। यस्तो प्रमाणिकरण आवश्यक बाहिर हुनुपर्छ। रोग को नैदानिक तस्वीर गाई अन्य साधारण संक्रमण समान हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई। यो उदाहरण, खुट्टा र मुख रोग, vesicular मुखशोथ, भाइरल पखाला, सुँगुर वा dermatofilez लागि, हुन सक्छ। पनि निदान nekrobakterioza विभिन्न etiology, क्षरण, अल्सर hooves, dermatitis को गठिया बहिष्कृत गर्नुपर्छ।
यो necrobacteriosis गाई जस्ता रोगबाट कसरी ठ्याक्कै निर्धारण गरिन्छ? यसलाई निदान सामान्यतया रोगग्रस्त ऊतक necrosis को चयन टुक्रा, एक स्वस्थ भाग संग सिमाना मा लिइएको मा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रयोगशाला मा, भौतिक विशेष वातावरण (अक्सर Kitt - Tarotstsi संग 10% सीरम) मा राखिएको थियो र सँगैको microflora थप सञ्चालन BCH र आइपिए मा अध्ययन निर्धारण गर्न 37 सी दुई दिनको लागि incubated। जनावर को अन्तिम निदान को रोगजनक smears मा पत्ता छ भने राख्नु भएको छ।
Necrobacteriosis गाई: एन्टिबायोटिक संग उपचार
यो रोग को संकेत तत्काल हुनुपर्छ लगािन्छ गर्दा कारबाही। अन्य रोग परिवर्तन मा अपरिवर्तनीय हुन सक्छ। Nekrobakterioza परिसर मा उपचार भइरहेको। व्यक्तिगत - ठूलो फारमहरु मा एक समूह पद्धति, र साना प्रयोग गर्नुहोस्। दुग्ध गाई मात्र प्रयोग लागूऔषधको उपचार मा, दूध मा पारित छैन।
necrobacteriosis रूपमा गाई मा यस्तो निदान स्थापना गर्दा, निम्न सुधारात्मक उपाय प्रदर्शन:
ऊतक हटाउन संग प्रभावित क्षेत्रको विस्तृत रासायनिक उपचार गर्नुहोस्।
लुगा धुने घाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड furatsilina समाधान आदि लगे छ
घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने तरल र पाउडर योगों लागू हुन्छ।
Fusobacterium necrophorum सहित Anaerobic जीवाणुहरु, सधैं भास्कुलर सुत्ने र प्रभावित Tissues बीच एक बाधा गठन। बारी मा यो निकै लागूऔषधको प्रवेश hinders। त्यसैले उच्च खुराक प्रयोग उपचार nekrobakterioza मा एन्टिबायोटिक। tetracycline बाहेक, सबै भन्दा यो रोग प्रयोग लागूऔषधको सबै प्रकार को प्रभावकारी समावेश:
पनि necrobacteriosis bovine गाई जस्तै रोगहरु को उपचार को लागि, आधुनिक जीवाणुरोधी लागूपदार्थ व्यापक स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामयिक अनुप्रयोगको लागि, उपयुक्त माथिको लागूऔषधको आधारमा aerosol एन्टिबायोटिक सहित। तिनीहरूले सफाई रासायनिक पछि hooves उपचार मुख्यतया प्रयोग गरिन्छ।
को प्रकोप nekrobakterioza मा फारमहरु मा प्रतिबन्ध
मा भएको खेत निम्न उपाय लिन पर्छ मा जनावर मा रोग को पहिचान:
बथानलाई देखि संक्रमित जनावर अलग;
एक निस्संक्रामक खुट्टा स्नान संग उपचार स्वस्थ टाप साँढेको र गाई;
माथि वर्णन रूपमा रोगग्रस्त जनावरहरूको उपचार उत्पादन।
कारण बेवास्ता nekrobakterioza अव्यावहारिक, गाई र साँढेको गर्न उपचार, सेनेटरी वध मा पारित भने।
तपाईंलाई थाह के चाहिन्छ
संक्रामक रोग, मानिसहरूलाई सहित - दुर्भाग्यवश, गाई necrobacteriosis। खेत यो संक्रमण कर्मियों को संक्रमण अवस्थामा दुर्लभ छन्, तर विद्यमान खतरालाई यो मूल्य छैन खातामा लिने छैन। मानिसहरू खेत मा काम गर्ने फैलन nekrobakterioza गाई हुनुपर्छ को संक्रमण को संभावना निर्मूल गर्न:
बिना गर्दा बिरामी जनावर (नुहाउनु गर्न काम पछि overalls र पन्जा मा राख्न) काम राम्रो व्यक्तिगत स्वच्छता पालन गर्न असफल;
सबै छाला घाउ मा उपलब्ध प्रभावकारी घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने प्रक्रिया समय आवश्यक छ।
को खेत कर्मचारी लागि कोठा पहिलो सहायता किरा, लागूपदार्थ लागि सबै आवश्यक नियमहरु संग पूरा उपस्थित छ।
necrobacteriosis गाई जस्ता खतरनाक रोग को प्रकोप रोक्न मद्दत गर्न उपायहरूको अग्रिम को संख्या। यो रोग polyvalent को रोकथाम लागि टीका, emulsified वा VIEV "Nekovak" प्रयोग गर्न सकिन्छ। nekrobakteriozom फारमहरु द्वारा वंचित नजिकै स्थित फारमहरु, अन्य कुराहरु, निम्न उपाय लग्नु गर्नुपर्छ:
खेत कर्मियों जनावर जीव को सामान्य सुदृढ उद्देश्य गतिविधिहरु बाहिर गर्नुपर्छ। यो गर्न, पहिलो पशु फिड सन्तुलित प्रदर्शन। गाई, calves र साँढेको को आहार compulsorily विभिन्न भिटामिन र खनिज पूरक प्रबन्ध। साथै, ध्यान फिड गुणस्तर हेर्दै।
बाहिर खेत मा पशु कल्याण सुधार उद्देश्य गतिविधिहरु बोक्न। stalls मा मल राम्ररी र समय साफ हुनुपर्छ। साथै, तपाईँले एउटा सम्भव दूषण nekrobakteriozom शक यदि सबै आवश्यक सुविधाहरु दर्दनाक कुराहरू उपस्थिति लागि inspected गर्नुपर्छ।
साफ र सुकेको र मुक्त-सीमा खर्क मैदान।
अन्य कुराहरु, समय समयमा necrobacteriosis गाई, disinfection जस्ता रोग एक फैलन मा एक खेत मा सञ्चालन गर्नुपर्छ। न्यूनतम गर्न घाटा कम गर्न पशुधन को जोखिम समसामयिक रोकथाम र endometritis र mastitis को उपचार पनि प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यी रोगहरु निकै पाठ्यक्रम nekrobakterioza जटिल सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई।
कसरी मासु र दूध देखि आउन
Necrobacteriosis गाई फारमहरु रोगग्रस्त जनावरहरूको कम उत्पादकत्व गर्न मुख्यतया कारण धेरै क्षति inflicts। सामयिक रोग प्रक्रिया को लागि रिसाइकिलिंग लागि मात्र प्रभावित क्षेत्र एक गाई वा साँढेको शवों पठाउनुहोस्। रोग septicemically थियो भने, वध सबै उत्पादनहरु बाल्न। जनावर धेरै आन्तरिक अङ्गहरू प्रहार गरिएको छ भने, तर यो मामला मा आफ्नो लास fatness को पर्याप्त डिग्री छ, खाना वा बिक्री को लागि मासु प्रयोग को संभावना मा निर्णय प्रयोगशाला मा एक गहन microbiological अध्ययन पछि बनेको छ।
पशु खाल, bolevshih nekrobakteriozom, पृथक क्षेत्रमा सुकेको, निर्देशन र कार्यान्वयन अनुसार disinfected। दूध बिरामी गाई pasteurization को नियम अनुसार बाहिर मात्र पछि खान्छन्। स्वस्थ जनावरहरू देखि, पनि प्रतिकूल खेत संग खुलेर बेच्न अनुमति दिएको छ।
बगैंचामा क्रप परिक्रमा। के त बगैंचामा लगाएको गर्न सकिन्छ
आफ्नो हातले broilers लागि फिड संरचना। के कुखुरा खुवाउन?
चिकन प्रमुख: प्रकार र विशेषताहरु
"Urinari" - मृगौला पत्थर को रोकथाम लागि बिरालो खाना
निलम्बन "उलनेबुला": सुविधा र फोटो
कृत्रिम भाषा र आफ्नो मूल्य
मोटर-किसान "टार्पा" - साजिशमा अयोग्य सहायक
अन्ना Banshchikova: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन
HUAWEI Ascend मेट - एक ठूलो स्क्रीन टीवी संग फोन
विशेषताहरु Scorpio महिला: विशेषताहरू
बब haircuts 2011 - सबैभन्दा यस वर्ष सुशील
श्रम इनपुट। गणना सूत्र
बियर मादक पदार्थ: लक्षण अनि जोखिम
अदुवा आहार: नियम र सावधानीहरु
कार पेन्टिङ प्रविधि। कार पेन्टिङ प्रविधि धातु